Samy tsy misy miteny amin
Samy tsy misy miteny amin´ny anaran´ny antoko na Ing Germain na Ing Olivier hoy ny sekretera jeneralin´ny MFM
25-08-2003 / 10:03
Anisan´ny noresahana na dia tsy tamin´ny fomba mivantana aza, nandritra ny fivorian´ny MFM Analamanga, notontosaina tetsy amin´ny Falda Antanimena ny tsy fitoviam-pijery, raha izay no azo ilazana azy teo amin´ny sekretera jeneralin´ny antoko sy ny mpikambana sasantsasany ao.
Raha tsahivina dia ilay fanazavana nataon´Ing Germain Rakotonirainy tao amin´ny radio tsy miankina iray eto an-drenivohitra, izay nanakiana mafy ny fomba fiasan´ny mpitondra no nanehoany izay hevitra izay ary voafoaka tamin´izany ny mpikambana MFM ao anaty fitondrana. Nandritra io fivorian´ny MFM Antananarivo io moa no nilazan´ny mpandaha-teny fa nisy tsy fitovian-kevitra hatrany teo amin´ny mpikambana hatramin´izay, saingy tamin´ity indray mitoraka ity dia nankalazaina izany noho ny fisian´ireo antoko hafa efa vaky. Ny sekretera jeneralin´ny MFM moa dia tamin´ny televizionina tsy miankina fa tsy nisy fifanatrehana tamin´ny mpikambana namany no nanambara fa samy tsy nisy niteny tamin´ny anaran´ny antoko MFM na ny tenany na ny mpanolo-tsaina manokan´ny Filohan´ny Repoblika.
Fa raha hiverenana ilay fivoriana tao amin´ny Falda dia nokendren´ny MFM Antananarivo hanazavana amin´ny an-tsipiriany ny resaka mafanafana eo amin´ny samy mpikambana ka anisan´izany ohatra fizotry ny toe-draharaham-pirenena, ny tanjona ary ny fifamatoran´ny hevitry ny MFM amin´ny pôlitika voafaritra ao amin´ny DSRP. Nitondrana fanazavana tao ihany koa ilay adihevitra manodidina ny tokony hamarotana na tsia amin´ny vahiny ny tany.
Marihina fa nisy tamin´ny nanatrika ny fivoriana, ny sabotsy lasa teo io no resy lahatra ary misy kosa ny manome tsiny ny
mpitondra amin´izay fanapahan-kevitra noraisiny izay. Anisan´ny fehin-kevitra tapaka tamin´io fotoana io ny hamoahan´ny MFM Antananarivo antotan-taratasy mirakitra ny resaka fananan-tany sy ilay fanafoanana ny hetra alaina amin´ny entana
sasantsasany ka ireny, hoy ny mpandaha-teny no haparitaka amin´ny mpikambana sy amin´ny olon-tsotra hifampitaizana sy
hampahafantarana azy ireo ny an-tsipiriany manodidina ireo lohahevitra roa ireo.